Akụkọ - Ngwaọrụ mgbasa ozi carbon na-arụ ọrụ
Ngwongwo na-ekpo ọkụ na-emepụta ihe nke Hangzhou lvran na-echebe gburugburu ebe obibi bụ nke mejupụtara carbon adsorption ịta ahụhụ, akụrụngwa combustion na ngwaọrụ eletriki. Ezubere akụrụngwa na-ere ọkụ na-ere ọkụ dị ka ụkpụrụ abụọ nke mgbasa ozi adsorption (arụmọrụ dị elu) na combustion catalytic (nchekwa ọkụ). Ya bụ, adsorption ịta catalytic combustion usoro.
Ngwongwo na-ere ọkụ na-ewepu ọtụtụ ụzọ gas maka ịrụ ọrụ na-aga n'ihu, ọtụtụ igbe adsorption carbon arụ ọrụ maka ọrụ ọzọ, yana otu ụlọ oku na-eme ka catalytic. Nke mbụ arụ ọrụ carbon adsorption tank adsorbs n'efu gas. Mgbe ọ fọrọ nke nta ka ọ jupụta, kwụsị ọrụ adsorption ma mezie ọgwụgwọ ahụ ozugbo. N'otu oge ahụ, a na-eji tank adsorption nke abụọ rụọ ọrụ maka adsorption na ịta ahụhụ. Mgbe ọ fọrọ nke nta ka ọ jupụta, a na-akwụsị ọrụ adsorption ma dozie ya ozugbo. Dika atughari a si di, otutu ogugu nke igbe adsorption carbon a na aru oru na-eme otu usoro adsorption na decorption dika ihe mbu nke igbe adsorption carbon. Achọpụtawo gas na-ekpofu ahịhịa dị iche iche dị iche iche (ọnụọgụ dị ọtụtụ ugboro karịa nke mbụ) ma zigara ya na ụlọ ọkụ ọkụ na-ekpo ọkụ maka ọkụ ọkụ. A na-eme ihe mmeghachi omume na-akpata catalytic na catalyst na nnukwu okpomọkụ nke 250-350 ℃, ya bụ, "combustion", nke mere na a na-agbanwe gas na-ekpofu ahịhịa na-adịghị njọ CO2 na H2O maka nhapu. Mgbe nchikota nke ahihia ahihia ruru ihe kariri 2000 ppm, enwere ike idobe ahihia ahihia na akwa akwa n'emeghi ka oku di na mbara, ma otutu ikuku nke odu mgbe anwuru oku ka anabatara n'ime ikuku.
Emeputa nke catalytic combustion akụrụngwa
Ngwongwo oku nke catalytic bu udiri ihe eji eme ka ikuku nke ikuku nke na-eji ogwu iji kpalie ma decompose ihe ndi oku na-ekpo oku na ahihia na ala. Ngwa akụrụngwa nke catalytic kwesịrị ekwesị maka ọgwụgwọ gas na-aga n'ihu na nhicha. Ọ bụrụ na ọ na-arụ ọrụ oge, ọ bụghị naanị ike ike dị mkpa maka ikpo ọkụ ọ bụla, kamakwa enweghi ike imegharị ọkụ ọkụ, nke ga-ebute oke ike. Ya mere, mgbe ị na-ahọrọ akụrụngwa ọkụ ọkụ, ụlọ nrụpụta kwesịrị ịtụle ọnọdụ ọrụ nke ụlọ ọrụ nke ọma.
Hangzhou lvran gburugburu ebe obibi na-echebe ngwá ọma mepụtara catalytic combustion akụrụngwa na elu ọcha arụmọrụ, ike nchekwa na gburugburu ebe obibi-echebe site na ịmịkọrọ oru ahụmahụ n'ụlọ na mba ọzọ. Green gbara catalytic combustion akụrụngwa enweela ihe ịga nke ọma n'akụkụ niile nke mba ahụ, akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na-acha ọkụ ọkụ na-enwu ọkụ dị na ntụpọ. Green gbara ọsọ site na mmelite na-aga n'ihu nke ọrụ na nkà ha, naanị maka ntụkwasị obi na nkwado gị.
Post oge: Ọkt-30-2019
Nnukwu nrụgide Centrifugal Fan, Anu ulo Scrubber, Centrifugal duct Fan, Radial Agụba Centrifugal Fan, Single Inlet Centrifugal Fan, Iyuzucha Fan,